I-MINI APARTMENT EZWENI - I-Airbnb
I-MINI APARTMENT EZWENI
Ngokuthe ngqo elwandle, kwindawo yokuhlala kuLwandle lwase-Ionian kunye nokufikelela kwangasese elwandle, indawo yokuhlala encinci ene-terrace exhotyiswe ngekhitshi kunye nombono wolwandle, igumbi. igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye ne-mezzanine eneebhedi ezi-2. I-TV kunye ne-air conditioner. Ishawari yangaphakathi nangaphandle. Izixhobo zolwandle. Ubuncinci kodwa busebenza. Akukho matshini wokuhlamba. Kungabandakanyi ilinen. Ulwandle oluhle kunye nolwandle.
Indlu iselwandle kwindawo yokuhlala enesango kwaye ijikelezwe yimithi yepine. I-terrace inokuhlala kunye ne-sink kunye nesiseko sekhitshi. Uxolo kwaye luzolile ixesha elininzi lonyaka. Into yokufaka umoya endlini. Inethi zeengcongconi. Kulula ukufikelela kunye nokuhlala ngaphandle kwemoto. Akukho ilinen
Ithuba lokuhlala imini yonke kwi-swimsuit, ukufikelela elwandle enchanting ngaphandle kokuhamba kunye nokuba nezinto ezibalulekileyo ezikufutshane nekhaya ngaphandle kokuthatha imoto. Ndiyayithanda kuba iyandiphumza kwaye indenza ndonwabele ulwandle olumnandi ngokukhululeka nokuba kuncinci.
Mna okanye abantu endibathembayo bayafumaneka ngayo nayiphi na into eyenzekayo